Ny tena maha-mpanao voalohany ny Torolalana ho an'ny Google Analytics - China Ningbo Zhongyi Plastic
Ny tena maha-mpanao voalohany ny Torolalana ho an'ny Google Analytics
Raha tsy fantatrao izay Google Analytics dia, tsy nametraka izany eo amin'ny tranonkala, na nametraka azy fa tsy mijery ny tahirin-kevitra, dia ity lahatsoratra ity dia ho anareo. Raha sarotra ho an'ny maro ny mino, mbola vohikala izay tsy mampiasa Google Analytics (na Analytics, raha tsy izany) mba handrefy ny fifamoivoizana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika dia handeha hijery avy amin'ny Google Analytics mpanao voalohany tanteraka ny fomba fijery. Nahoana ianao no mila izany, ny fomba hahazoana azy io, ny fomba hampiasana azy io, ary workarounds ny olana iombonana.
Nahoana no tompon'ny tranonkala rehetra mila Google Analytics
Moa ve ianao manana bilaogy? Moa ve ianao manana vohikala voasakantsakan'ny? Raha eny ny valiny, na ho an'ny tena manokana izy ireo na ny fampiasana raharaham-barotra, dia mila Google Analytics. Ireto misy vitsivitsy amin'ireo fanontaniana maro momba ny tranonkala izay hainao ny mamaly mampiasa Google Analytics.
Firy ny olona mitsidika ny tranonkala?
Aiza ny mpitsidika velona?
Ve aho Mila namana finday-tranonkala?
Inona no vohikala mandefa fifamoivoizana ny ny tranonkala?
Inona no tetika barotra hitondra fiara ny fifamoivoizana indrindra ny ny tranonkala?
Iza amin'ireo pejy eo an-tanako vohikala no malaza indrindra?
Firy ny mpitsidika no navadika ho Leads na ny mpanjifa?
Ahoana no nampisy ny manova fo ny mpitsidika tonga avy dia handeha amin'izay ny tranonkala?
Ahoana no ahafahako manatsara ny tranonkala ny hafainganam-pandeha?
Inona bilaogy afa-po hanao ny mpitsidika toy ny tena?
Maro dia maro ny fanontaniana fanampiny Google Analytics afaka mamaly, fa izy ireto no ireo izay manan-danja indrindra ho an'ny ankamaroan'ny tranonkala tompony. Andeha isika hijery ny fomba ahafahanao mahazo Google Analytics eo amin'ny tranonkala.
Ahoana ny fametrahana Google Analytics
Voalohany, dia mila ny Google Analytics kaonty. Raha toa ka manana kaonty Google Kilonga izay ampiasaina ho an'ny asa hafa toy ny Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google+, na ny YouTube, dia tokony hanangana ny Google Analytics fampiasana ny kaonty Google. Na dia mila hamorona iray vaovao.
Izany dia tokony ho kaonty Google kasainao foana mandrakizay ianao ihany no mahazo. Afaka manome fahafahana miditra foana ny Google Analytics hafa nidina ny lalana ny olona, ​​nefa tsy te ho olon-kafa tanteraka fanaraha-maso izany.
Big Soso-kevitra: aoka tsy ny olona (ny mpamorona tranonkala, tranonkala developer, tranonkala miaramila, SEO olona, ​​sns) namorona ny tranonkala ny kaonty Google Analytics eo ambany ny kaonty Google mba hahafahany "mitantana" izany ho anao. Raha toa ianao sy io olona io fomba anjara, dia hitondra ny Google Analytics angon-drakitra momba azy, ary dia tsy maintsy manomboka ny rehetra.
Nanangana ny kaonty sy ny fananany
Raha vao manana kaonty Google ianao, dia afaka mankany amin'ny Google Analytics ary tsindrio ny Sign ho any Google Analytics bokotra. Ianao, dia ho niarahaba ny dingana telo no tsy maintsy atao mba hanorina Google Analytics.
Rehefa avy tsindrio ny bokotra Sign Up, dia mameno vaovao ho an'ny namany Sary.
Google Analytics dia manolotra ambaratongam handamina ny kaonty. Afaka mahatratra 100 Google Analytics kaonty ambanin'ny kaonty Google iray. Afaka mahatratra 50 tranonkala fananana eo ambany Google Analytics kaonty iray ihany. Afaka mahatratra 25 fijery ambany fananan'ny tranonkala iray.
Ireto misy tranga vitsivitsy.
Ohatra 1: Raha manana tranonkala iray, ianao ihany no mila ny Google Analytics kaonty amin'ny tranonkala iray fananany.
Tantara 2: Raha manana tranonkala roa, toy ny raharaham-barotra iray noho ny ary ny iray ho amin'ny fampiasana manokana, dia mety ho te-hamorona tantara roa, ny iray fanomezana anarana "123Business" ary ny iray "manokana". Ary ianareo dia hanorina ny raharaham-barotra eo amin'ny tranonkala ny kaonty 123Business sy ny vohikala manokana eo ambany tantara manokana.
Ohatra 3: Raha manana orinasa maro, fa latsaky ny 50, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana tranonkala iray, dia mety ho tianao ny hametraka azy ireo amin'ny Business azy rehetra teo amin'ny tantara. Ary manana kaonty manokana ho an'ny vohikala manokana.
Tantara 4: Raha manana maro orinasa sy ny tsirairay amin'izy ireo dia manana am-polony ny vohikala, ho tanteraka mihoatra noho ny 50 tranonkala, dia mety ho tianao ny hametraka tsirairay raharaham-barotra eo ambany ny azy tantara, toy ny 123Business kaonty, 124Business kaonty, sy ny sisa.
Tsy misy tsara na ratsy fomba nanangana ny Google Analytics kaonty-izany resaka fotsiny ny fomba te-handamina ny toerana. Afaka Hanova anarana foana ny kaonty na ny fananana nidina ny lalana. Mariho fa tsy afaka mifindra ny property (vohikala) avy amin'ny iray Google Analytics-kaonty hafa ianao dia tsy maintsy hanorina fananana vaovao, eo ambanin'ny kaonty vaovao, ary ho very ny ara-tantara no nanangona angon-drakitra avy amin'ny fananana tany am-boalohany.
Fa ny tanteraka ny mpitari-dalana mpanao voalohany, isika dia handeha ho any mieritreritra manana vohikala iray, ary iray ihany no mila fomba fijery (ny toerana misy anao, angon-drakitra rehetra jerena. Ny setup dia hijery zavatra toy izany.
Ambany izany, dia hanana ny safidy ampiendrehina izay misy ny Google Analytics angon-drakitra azo zaraina.
Hametraka ny fehezan-dalàna ampy
Raha vao vita ianao, dia tsindrio ny bokotra ID Get Tracking. Hahazo ny PopUp ny Google Analytics sy ny fanao, izay tsy maintsy manaiky. Avy eo ianao dia hahazo ny Google Analytics fehezan-dalàna.
Izany dia tsy maintsy nametraka ny teny rehetra amin'ny pejy eo amin'ny tranonkala. Ny fametrahana dia miankina amin'ny inona no karazana tranonkala ianao. Ohatra, ny WordPress aho vohikala teo amin'ny sehatra manokana amin'ny fampiasana ny Genesisy Framework. Sehatra io dia manana toerana manokana mba hanampy lohapejy sy Footer soratra ho ny namany Sary.
-Tsy izany, raha manana ny WordPress eo amin'ny sehatra, dia afaka mampiasa ny Google Analytics avy Yoast plugin mba hametraka ny fehezan-dalàna mora foana na inona na inona foto-kevitra na ny rafitra ampiasainao.
Raha manana tranonkala naorina tamin'ny HTML antontan-taratasy ianao, dia hanampy ny ampy fehezan-dalàna eo anatrehan'ny </ lohany> mari-pamantarana eo amin'ny tsirairay ny pejy. Azonao atao ny manao izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny andinin-teny tonian-dahatsoratra fandaharana (toy ny TextEdit for Mac na kahie ho an'ny Windows) ary avy eo dia nampakaranao ny antontan-taratasy maro be ny tranonkala mampiasa ny fandaharana FTP (toy asFileZilla).
Raha manana Shopify e-varotra fivarotana, ianao kosa ho any amin'ny Online Store toe-javatra ary apetaho ao amin'ny fehezan-dalàna ampy izay voalaza.
Raha manana bilaogy ao amin'ny Tumblr, ianao kosa ho any amin'ny bilaogy, tsindrio ny bokotra Hanova ny Theme amin'ny ambony havanana ny bilaogy, ary avy eo dia hiditra ihany ny Google Analytics ID ao amin'ny toe-javatra.
Araka ny hitanao, ny fametrahana ny Google Analytics miovaova mifototra amin'ny lampihazo ampiasainao (News rafitra fitantanana, tranonkala mpanorina, e-varotra rindrambaiko, sns), ny foto-kevitra ampiasainao, ary ny plugin ampiasainao. Tokony ho afaka mahita mora toromarika mba hametraka Google Analytics amin'ny tranonkala rehetra amin'ny fanaovana ny tranonkala fikarohana ho an'ny sehatra + ny fomba hametraka Google Analytics.
Rehefa avy mametraka ny ampy fehezan-dalàna eo amin'ny tranonkala ianao, dia te ampiendrehina kely (fa tena ilaina) mametraka ao amin'ny tranonkala ny mombamomba azy ao amin'ny Google Analytics. Izany no toe-javatra ny tanjona. Afaka mahita izany amin'ny fipihana eo amin'ny Admin rohy tao an-tampon'ny ny Google Analytics ary avy eo manindry eo amin'ny Tanjona eo ambany ny tranonkala ny View tsanganana.
Tanjona hilaza Google Analytics, rehefa zava-dehibe nitranga teo amin'ny namany Sary. Ohatra, raha manana tranonkala izay hiteraka Mitondra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny teny, dia te-hahita (na mamorona) a misaotra anao pejy izay mpitsidika mifarana eo ireo raha vao nanaiky ny fifandraisana vaovao. Na, raha manana tranonkala izay mivarotra vokatra, dia te-hahita (na mamorona) farany misaotra anao, na ny fandraisana ho mpikambana ho an'ny mpitsidika pejy an-tanety eo ireo raha vao nahavita ny fividianana.
* CAPTCHA: azafady mifidy ny Flag
Post fotoana: Aug-10-2015